ANALAJIROFO: Mampidi-bolabe ny faritra rehefa taom-piotazana lavanila. - Journal Madagascar
ANALAJIROFO: Mampidi-bolabe ny faritra rehefa taom-piotazana lavanila.
Ny 11 jolay 2017 ny misokatra amin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana lavanila any amin’ny faritra Analajirofo. “Efa misy ihany toerana ihany efa ny manomboka mioty fa io daty voatondro io no tena ofisialy”, hoy i Jacques RAMAROSON, Lehiben’ny faritra Analajirofo.
Ho fiatrehana izany, efa mipetrakapetraka ny lamina rehetra. Ao anatin’izany ny fitandroana ny filaminana.
Voasokajy ho fanoitra fampandrosoana ny faritra ny voly fanondrana lavanila. Manana fidiram-bola ny kaominina rehefa taom-piotazana. Nambaran’ny lehiben’ny faritra fa betsaka ny foto-drafitra asa vita noho io lavanila io.
Nanatrika ny fivorian’ny Lehiben’ny faritra 22, natao teto Analamanga i Jacques RAMAROSON ka nifanakalo hevitra tamin’ny faritra hafa mamboly lavanila toy i SAVA. Ho fanatsarana seham-pihariana sy ny paika ady hanatanterahana izany no tena tanjona tamin’izany.
SIM: Les industries risquent d’être faillite à cause de la grève du syndicat des douanes.
HUAWEI: Une photographie exceptionnelle avec les Smartphones P10 et P10 plus.